Home Educational Articles IT and Education
Tuesday,11 Sep 2012
အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုဘယ်လိုတည်ထောင်မလဲ ......... ? ယနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်း IT နည်းပညာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတာဟာ တရိပ်ရိပ်နဲ့ ဒီရေအလားပါပဲ။ ဒါဟာကောင်းသော လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲဗျာ...။ ဒီနေ့လူငယ်တွေဟာ အချိန်နှင့်အမျှ ကြိုးစားနိုင်ကာမှ ခေတ်နောက်ကျမကျန်ခဲ့မှာ အမှန်ပါပဲ ... ။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း အင်တာနက်ကို လူကြီးလူငယ်မရွေး သုံးစွဲလာကြတာဟာ အားရကျေနပ်စရာပါပဲ...။
ယခုဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေသမျှကို ကိုယ့်အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ သတင်း၊ အချက်အလက်တွေကို သိမြင်နိုင်တဲ့ Inter Network စနစ်ကြီးဟာ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မြို့ကြီးများသာမက နယ်မြို့များထိ ကျယ်ပြန့်လာတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ကာ အင်တာနက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လောက်ကို စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့ဗျာ ...။ ဖွင့်နိုင်တာမဖွင့်နိုင်တာ အသာထားပါအုံး ...။ ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်မယ်၊ ဘယ်လိုတွေပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို တစ်ခါတည်းသိရှိနားလည်သွားစေချင်ပါတယ်..။
အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် အရင်ဆုံးလိုအပ်တာကတော့ အင်တာနက်လိုင်းပါ..။ အင်တာနက်လိုင်းကို ဘယ်လိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်မှာလည်းဆိုတာကို အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားရမှာပါ ... ။ အင်တာနက်လိုင်းကတော့များပါတယ်။ WIMAX, ADSL, IP STAR, BROADBAND, FTTX စသည့် လိုင်းများကို လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်ကတော့ WIMAX(Red Link) ကို သုံးပြီးတော့ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု စနစ်ကို ဦးစားပေးပြောပြသွားပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ဦးဆုံး (ISP=Internet Service Provider) မှာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် IP Address တစ်ခု လျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Redlink မှ Internet Service အတွက် ချပေးတဲ့ WIMAX နည်းပညာနဲ့ချိတ်မယ် ဒါဆိုရင်သူတို့ကလာပြီး (CPE) Antenna လာချိတ်ပေးပါ့မယ်။
ပြီးရင် အင်တာနက်ရဖို့အတွက် IP Address တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ လိုင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Band Width Speed ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ IP Address တစ်ခုရပြီဆိုရင် အိုကေပါပြီ။
IP Address ရပြီးရင်တော့ Local Network အတွင်းကို Internet Sharing ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါအုံးမယ်။ ဒီမှာတော့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ Internet Connection Sharing လုပ်ကြပါတယ်။ Router ကို သုံးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် Share လုပ်ပေးမယ့် Server တွေထိုင်မှာလား ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ - ပြောရ ရင်တော့ (ISA Server, ICS, NAT, Squid Proxy Server) စသည့် Server များထိုင်ပြီးတော့ Sharing လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Server အကြောင်းတွေပြောနေရရင် အကျယ်ချဲ့သွားသလိုဖြစ်မှာမို့လို့ ဒီမှာတော့ ကျွန်တော်က အကုန်အကျလည်း သက်သာပြီးတော့ ကိုင်တွယ်ရတာလည်း လွယ်ကူမှုရှိတဲ့ Router ကို အသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်ပြပါ့မယ်။ Router ကတော့ WAN နှင့် LAN ကို Route လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Router ကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အမျိုးအစားကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Router မှာ WAN Port(1) Port ပါပြီး LAN Port (4) ခုလောက် ပါရှိပါတယ်။ WAN Port မှာ Internet WAN ကြိုးထိုးပါ။ ပြီးတော့ LAN အတွက်တော့ Router အတွင်းသို့ ဝင်ပြီး Configuration ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ LAN IP Address ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ IP Class တစ်ခုအသုံးပြုနိုင်ပြီး ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာကတော့ LAN IP ကို Static and Dynamic ဆိုပြီး (၂) မျိုးပေးနိုင်လို့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလို Setting သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Local Network အတွင်းမှာရှိတဲ့ PC တွေဟာ Internet Connection ကို သုံးစွဲလို့ရပါပြီ။ Hardware Router ဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ Virus အကိုက်ခံရမှာလည်း ပူစရာမလိုပါဘူးဗျာ။
Server ထိုင်မယ်ဆိုရင် Virus ရန်ကိုကြောက်ရသလို Error များနှင့်လည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ Router ပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် Client PC တွေအတွက် ထိန်းချုပ်ဖို့ရန် Cafezee Server ထိုင်ပေးရပါအုံးမယ်။ ဒါမှ User တွေအတွက် Setting များကို ကြိုက်သလို သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။
Local Network အတွင်းမှာရှိတဲ့ PC တွေအတွက် Internet Software များကိုလည်း တင်ပေးရပါမယ်။ Internet Software များကတော့ Mozilla Firefox, Opera, Flock စသည့် Browser များ Google Chat, VZO, QQ, Google Earth နှင့် Game များ အစရှိသည့် လိုအပ်သော Software များ ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောစရာ တစ်ချက်ကျန်ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ တစ်ချို့က အင်တာနက်ဆိုင်နဲ့ ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆိုင်ကို တွဲပြီးဖွင့်တက်ကြပါတယ်ဗျ..။ အဲ့ဒီတော့ ဂိမ်းဆော့ချင်တဲ့သူလည်း အဆင်ပြေတယ်။ အင်တာနက်သုံးချင်ရင်လည်း အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ချက်က အင်တာနက်အသုံးပြုရင်း တစ်ချို့က Browser Loading Time ကို စောင့်ရင် ဂိမ်းဆော့တက်ကြတယ်ဗျ။ အဲ ... ဒီတော့ကာ အင်တာနက်အသုံးပြုချင်သူများ၊ ဂိမ်းဆော့ချင်သူများ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။ နောက်တစ်ချက် စီးပွားရေးအရလည်း အိုကေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်တစ်ချက်က ဂိမ်းဆော့ကစားတဲ့သူတွေက နည်းနည်းဆူတယ်ဗျ။
ဒါကလည်း သူတို့ရဲ့ အကျင့်လိုဖြစ်နေပြီ။ ဒီတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုရင်း သတင်းအချက်အလက်တွေ လာရှာတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချက်ကလည်း အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွက် အရေးပါတဲ့ စဉ်းစားစရာ တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုမယ့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကတော့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဟာ အနည်းဆုံး CPU Intel Pentium 3.0 မှ အထက်၊ RAM 512 DDR2 မှ အထက် Hard Drive 80 GB နှင့် LCD 17 လက်မခန့်ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ Motherboard ကတော့ သင်နှစ်သက်ရာ GIGABYTE, MSI, ASUS အစရှိသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Powre Supply ကလည်း 450W ခန့် ရှိရန်သာ လိုအပ်ပါတယ်။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေလည်း ပြောပြပြီးပါပြီ။ အဲ .... အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်က ကွန်ပျူတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်အတွင်းမှာ အနည်းဆုံး ကွန်ပျူတာ (၁၀) လုံးလောက်တော့ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ Internet Line ကကုန်ကျငွေ (၁၅) သိန်း Router ကတော့ ဈေးပေါပေါတောင် (၁) သိန်း ဝန်းကျင် Computer တစ်လုံးကို UPS, Monitor အပါအဝင် (၅) သိန်းခန့် (၁၀) လုံးလောက်ဆိုရင် သိန်း (၅၀)။ စုစုပေါင်းဆိုခန့်မှန်းခြေ သိန်း (၇၀) ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်မယ် ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီဗျ။ အားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ...။
MCIA for you
Myanmar ICT Statistics
Online Unicode Converter
Copyright © 2017. MCIA: Myanmar Computer Industry Association.